किन हुन्छ महिला बलात्कार ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण किन हुन्छ महिला बलात्कार ?
on: ३ भाद्र २०७५, आईतवार ०६:४० लेख | दृष्टिकोण
किन हुन्छ महिला बलात्कार ?
हामीले दिनँहुजसो बलात्कारका घटना सुनिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि पछिल्ला ३ वर्षमा औसतमा दिनँहु ३ जना बलात्कृत भइरहेको देखाएको छ । यसमध्ये दुई तिहाइ १६ वर्षभन्दा मुनिका छन् । ऊजुरी दिइहाले पनि सोबारे फैसला हुन र पीडितले न्याय पाउन निकै समय लाग्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा जम्मा ४ हजार ७ सय ८३ मुद्दामध्ये २ हजार ८ सय २१ मात्रै फछ्र्योट भएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले देखाएको छ । १ हजार ९ सय ६२ ओटा विचाराधीन छन् । यो त प्रहरीकहाँ ऊजुरी परेको तथ्याङ्क मात्रै हो । प्रलोभन, धम्की र समाजमा बेइज्जत हुने डरले पीडित र उसको परिवारले प्रहरीकहाँ ऊजुरी नदिने भएकाले बाहिर आउन नसकेका घटना असङ्ख्य छन् ।
यो अवस्था नेपालमा मात्रै छैन । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा त स्थिति झन् कहालीलाग्दो छ । त्यहाँको राष्ट्रिय अपराध तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सन् २०१६ मा त्यहाँ दिनमा १ सय ६ ओटा बलात्कारका घटना भएको र १० मध्ये ४ पीडित नाबालिग भएको देखाएको थियो । यो स्थिति नेपाल र भारतजस्ता देशहरूमा मात्रै हुन्छन् भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ । तर, यस्तो होइन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन)को अपराध प्रवृत्ति तथ्याङ्क २०१३ अनुसार प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा बलात्कार ऊजुरीको आधारमा बेलायत विश्वमै सबैभन्दा अघि छ । त्यहाँ प्रतिलाखमा ३६ दशमलव ४४ ले आफूमाथि बलात्कार भएको बताएका थिए । यो सूचीमा अमेरिका, ब्राजिल फ्रान्स र मेक्सिको शीर्ष पाँच स्थानमा छन् । सङ्ख्याका आधारमा भने अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा धेरै बलात्कार हुने देश हो । अपराध प्रवृत्ति तथ्याङ्क २०१३ अनुसार अमेरिकामा वर्षेनि १ लाख १३ हजार ६ सय ९५ बलात्कारका घटना ऊजुरी आएको थियो । यो सूचीको बाँकी रहेको शीर्ष पाँच स्थानमा भने ब्राजिल, भारत, बेलायत र मेक्सिको छन् ।
पश्चिमी देशहरूमा बलात्कारका घटनामध्ये १६ प्रतिशत देखि ३३ प्रतिशत मात्रै प्रकाशमा आउने गरेको अनुसन्धाताहरूको अनुमान छ । नेपाल, भारतलगायत पूर्वीय देशहरूमा त यो भन्दा पनि निकै कम घटना मात्रै प्रकाशमा आउने गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नाबालिग बलात्कार किन धेरै ?
नेपालीमा एउटा उखान नै छ, ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो ।’ साना र कमजोरलाई सजिलै ललाइफकाई गर्न सकिने, डर धम्की देखाएर चुप लगाउन सकिने भएकाले पनि उनीहरूमाथि यस्तो घटना बढी हुने गरेको हो । उनीहरूले आपूmमाथि भएको ज्यादतीबारे घरपरिवारलाई बताउँदै बताउँदैनन् । केही गरी बताइहाले पनि कतिपयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । केहीले भने समाजमा बेइज्जत हुने डर, छोरीको भविष्य बिग्रने चिन्ता र ठूली भएपछि बिहे नहुने भयमा सो घटनालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् ।
किन हुन्छ बलात्कार ?
पुरुषले महिलामाथि बलात्कार किन गर्छन् भन्ने बुझ्नै नसकिने रहस्य होइन । यसअघि भएका विभिन्न अनुसन्धान र अध्ययनले बलात्कारीको यौनिक मात्रै होइन, मनोवैज्ञानिक जटिलताको व्याख्या गर्ने कोशिश गरिसकेका छन् । पुरुष महिलाको तुलनामा शारीरिक रूपमा बलियो हुने भएकाले बलात्कार गर्नु उसका लागि सजिलो भएको हो । बलात्कारबारे विभिन्न मिथक (प्रामाणिक नभए पनि धेरैले विश्वास गर्ने गरेको धारणा) सुन्न पाइन्छ । सबैभन्दा साधारण तर आश्चर्यलाग्दो मिथक भने यस्तो छ : यौन गतिविधिबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहेको वा त्यस्तो गतिविधिमा बढी संलग्न हुने पुरुषले एक्लो महिला देख्दा आत्मनियन्त्रण गुमाएर बलात्कार गर्छ । मानोविज्ञानलाई विज्ञानका रूपमा हेर्न थालिएदेखि नै यस्तो धारणा विकास भएको हो । अहिले पनि आधारभूत अवधारणा यस्तै नै छ ।
बलात्कारको घटनापछि महिलाले लगाएको (छोटो) कपडा, राति अबेरसम्म घरबाहिर बस्ने, बार वा क्लबमा एक्लै जाने बानी आदिलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले समेत यस्तो सिद्धान्तलाई बल दिइरहेको छ । महिला वा केटीले ‘सभ्य’ लुगा लगाए त कसैले ऊमाथि ‘कु’ दृष्टि नै राख्दैन भन्ने सोच पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । यस्तो सोच राख्नेमा पुरुषहरू मात्रै छैनन् महिलाहरू पनि छन् । अशिक्षितहरू मात्रै छैनन्, पढेलेखेका र सभ्रान्तहरूमा पनि यस्तो सोच छ । पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ तर महिलाले भने ऊमाथि समाजले लगाएको सीमा नाघ्नु हुँदैन भन्ने सोच जबसम्म रहन्छ तबसम्म बलात्कार बन्द हुँदैनन् ।
बलात्कारको पछाडि रहेको मनोविज्ञान निकै जटिल छ । त्यसैले बलात्कारीको मस्तिष्कलाई बुझ्न अनुसन्धाताहरूले विभिन्न सिद्धान्तको विकास गरेका छन् । हाइड्रोलिक सिद्धान्त, जैविक सिद्धान्त, कमोडिटिफिकेशन सिद्धान्त, विकास सिद्धान्त, लैङ्गिक घृणामा आधारित अपराध र नियन्त्रण सिद्धान्त आदि यसका उदाहरण हुन् । बलात्कारीहरूको व्यवहार केलाउँदा समग्रमा अवसरवादी, यौन परिकल्पनाले बेचैन, कुनै एक महिलाप्रतिको घृणा, आफूलाई शक्तिशाली देखाउने सोच, संसारप्रतिको वितृष्णा र ‘सेक्सुअल स्याडिष्ट’ आदि पाइएको छ । अन्य केही अध्ययनले भने यौन उत्तेजनाभन्दा पनि हिंसा बलात्कारमा परिणत भएको देखाएको छ । बलात्कारीहरूको जीवनी केलाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बलात्कारी बाल्यकालमा यौनहिंसाको शिकार भएको अध्ययनहरूमा पाइएको छ ।
अहिलेसम्म भएको विविध अध्ययनहरूले साधारण पुरुषको तुलनामा बलात्कारीहरूमा टेष्टोष्टेरोन (सेक्स हर्मोन) स्तरमा खासै धेरै भिन्नता नरहेको देखाएका छन् । यौन गतिविधिबाट वञ्चित हुनु र बलात्कार गर्नुबीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन् । केही अध्ययनले भने पोर्नोग्राफी र वेश्यावृत्तिले बलात्कारलाई घटाएको पनि देखाएको छ । कुनै एउटा महिलासँग उठेको रिस अर्कोमाथि पोख्न, आफूले गरेको यौन आग्रह अस्वीकृत भएर पुरुष अहम् ठेस पुगेपछि सोको बदला लिन बलात्कार हुने गरेका छन् । हरेक बलात्कारीको व्याख्या गर्ने एउटै मात्र मानसिक सूत्र छैन् भन्छन् अनुसन्धाताहरू । ‘बलात्कारको अरोपमा जेलसजाय भोगिरहेका पुरुषहरूमा निकै विविधता पाइन्छ,’ बोष्टन युनिभर्सिटी मेडिकल स्कूलका मनोविज्ञानका प्रध्यापक डा. रोबर्ट प्रेण्ट्की भन्छन् ।
सामाजिक रहनसहन र प्रभावले पनि त्यस्तो व्यवहार निर्धारण गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने बाल्यकालदेखि नै हामीलाई पुरुष ठूलो हो, महिलाले पुरुषले भनेको मान्नुपर्छ । महिला सानो हो, उसले सबै कुरा सहनुपर्छ भन्ने शिक्षादीक्षा दिँदै आएको छ । महिला सधैं पुरुषकै संरक्षकत्वमा बस्नुपर्छ भन्ने धारणा महिलामै पनि व्यापक छ । यस्तोमा महिलाले पुरुषको विद्रोह गर्दा वा उसले भनेको नमान्दा मभन्दा सानो भएर मेरो विरोध गरी भन्ने भावनाले पनि त्यस्तो व्यवहार बढाएको हो कि ? पुरुष स्वयम्लाई आफूले नराम्रो काम गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महिलाले आफू बलात्कृत भए भन्ने कुरा कसैलाई भन्दिन भन्ने सोचेर पनि त्यस्तो गर्छन् ।
प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाउने चेष्टा
अहिले हरेक क्षेत्रमा पुरुषलाई पुरुषले मात्रै होइन, माहिलाहरूले पनि उत्तिकै टक्कर दिइरहेका छन् : चाहे विज्ञान होस् वा प्रविधि, शिक्षा होस् वा व्यापार–व्यवसाय, मनोरञ्जनको क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र । महिलाले पनि पुरुषकै बराबरीमा उनीहरूले जतिकै काम गरिरहेका छन् । पहिला–पहिला महिलाले घरायसी काम गर्नुपर्छ पुरुषले भने बाहिर गएर कमाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । समय, परिस्थिति, शिक्षादीक्षा र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै महिलाहरू पनि घरबाहिर गएर काम गर्ने, आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गर्न सक्ने, घर परिवारलाई पाल्न सक्ने भएका छन् । महिलाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेकाले पुरुषले महिलामाथि बलात्कार गरेर समग्रमा महिला प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाउन खोजेको पो हो कि ? बलात्कारका पछाडि रहेका यस्ता मनोवैज्ञानिक कारणबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ ।
‘इक्वालिटी नाउ’ नामक संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ७३ सदस्य राष्ट्रलगायत ८२ ओटा क्षेत्रमा बलात्कार र यौनहिंसासम्बन्धी कानूनबारे सन् २०१२ मा एक विश्लेषण गरिएको थियो । सो विश्लेषणले विश्वमा बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा व्यापक भेदभाव रहेको र राम्रो कानूनको व्यवस्था भएको स्थानमा पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको देखाएको थियो । विश्लेषणअनुसार अपराधीसँग पीडितलाई विवाह गराइदिने वा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अपराधीलाई स्वतन्त्र बनाइदिने, विवाहित दम्पतीमा श्रीमान्ले श्रीमतीको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्नुलाई गैरकानूनी नमान्नेलगायत समस्या देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० का लागि दिगो विकास लक्ष्यमा पनि लैङ्गिक समता प्राप्त गर्ने, सबै महिला र बालिकालाई सशक्त बनाउने, उनीहरूमाथि सार्वजनिक र निजी स्थलमा हुने सबै खाले हिंसा रोक्ने आदि लक्ष्य तोकिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न यूएनका सबै सदस्य राष्ट्रले विभिन्न खाले कानून ल्याएका छन् । तर, ती कानून प्रभावकारी र पर्याप्त नभएको पछिल्लो समय सार्वजनिक बलात्कार र महिला हिंसाका तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।
बलात्कार यही कारणले हुन्छ भन्ने छैन । यसका विविध पक्ष छन् । महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छ । तर, जसले जसलाई जे कारणले बलात्कार गरे पनि यो एउटा जघन्य मानवीय अपराध हो ।